Ukuthengiswa kweProximity: Yintoni leyo? Zeziphi ezo ntlobo?
NgoLwesihlanu, Februwari 5, 2021 NgoMgqibelo, Matshi 6, 2021 Douglas Karr
Ngokukhawuleza xa ndingena kwikhonkco lasekhaya laseKroger (ivenkile enkulu), ndijonga ezantsi kwifowuni yam kwaye iapp iyandixwayisa apho ndinokuthi ndivele khona ibhakhowudi yebhanki yaseKroger yokujonga okanye ndingavula usetyenziso ukukhangela kwaye ndifumane izinto kwi iipaseji. Xa ndindwendwela iVerizon ivenkile, iapp yam iyandilumkisa ngekhonkco lokungena ngaphambi kokuba ndiphume emotweni.
Le yimizekelo emibini emikhulu yokuphucula amava omsebenzisi ngokusekwe I-hyperlocal ezibangela. Icandelo laziwa njenge Ukuthengisa okukufuphi.
Ayiloshishini elincinci, elilindeleke ukuba likhule liye kwi-52.46 yezigidigidi zeedola ngo-2022 ngokwe Iimarike.
Yintoni ukuThengisa kufutshane?
Ukuthengisa kufutshane kuyo nayiphi na inkqubo esebenzisa ubuchwephesha bendawo ukunxibelelana ngqo nabathengi ngezixhobo zabo eziphathwayo. Ukuthengisa kufutshane kunokubandakanya ukubonelelwa ngentengiso, imiyalezo yokuthengisa, inkxaso kubathengi, kunye nokucwangciswa, okanye uninzi lwezinye iindlela zokuzibandakanya phakathi komsebenzisi wefowuni ephathekayo kunye nendawo ekufutshane nayo.
Ukusetyenziswa kwentengiso ekufutshane kubandakanya ukuhanjiswa kweendaba kwiikonsathi, ulwazi, umdlalo, kunye nezicelo zentlalo, ukungena kweentengiso, iindlela zokuhlawula kunye nentengiso yasekhaya.
Ukuthengisa okukufuphi ayisiyotekhnoloji enye, inokuphunyezwa kusetyenziswa iindlela ngeendlela ezahlukeneyo. Kwaye ayikhawulelwanga ekusebenziseni i-smartphone. Iilaptops zanamhlanje ezenziwa ukuba zisebenze ngeGPS zinokujoliswa kubuchwephesha bokusondela.
NFC - Indawo ekuya kuyo ifowuni inokumiselwa ngu unxibelelwano kufutshane-ebaleni (NFC) Inikwe amandla kwifowuni eqhagamshela kwi-chip yeRFID kwimveliso okanye kwimidiya. I-NFC yitekhnoloji esetyenziselwe iApple Pay kunye nobunye ubuchwephesha bokuhlawula kodwa akufuneki ibekelwe umda kwintlawulo. IiMyuziyam kunye nezikhumbuzo, umzekelo, zinokufaka izixhobo zeNFC ukubonelela ngolwazi lokhenketho. Iindawo zentengiso zinokuhambisa i-NFC ezishelfini kulwazi ngemveliso. Kukho itoni yethuba lokuthengisa kunye netekhnoloji yeNFC.
Geofencing -Ukuba uhamba nefowuni yakho, unxibelelwano lwakho lweselula lulawulwa phakathi kweenqaba ezinde. Iinkqubo zokuthengisa umyalezo wombhalo zingasebenzisa indawo okuyo ukutyhala imiyalezo ebhaliweyo kuphela kwezo zixhobo zikummandla othile. Oku kwaziwa njenge I-SMS yokwenza izixhobo. Ayisiyo iteknoloji echanekileyo, kodwa kunokuba luncedo ukuqinisekisa ukuba umyalezo wakho uthunyelwa kuphela kubaphulaphuli ojolise kubo ngexesha olifunayo.
Bluetooth Iindawo zokuthengisa zingasebenzisa beacons enokuqhagamshela kwi-smartphone yakho. Ngokwesiqhelo kukho usetyenziso lweselfowuni olwenza ukuba iteknoloji kunye nemvume icelwe. Ungatyhala umxholo ngeBluetooth, usebenze iiwebhusayithi zalapha kwiWiFi, usebenzise ibhakana njengendawo yokufikelela kwi-Intanethi, wenze njengendawo yokuthimba, unikeze iinkonzo zonxibelelwano, kwaye usebenze ngaphandle konxibelelwano lwe-Intanethi.
RFID -Kukho iitekhnoloji ezahlukeneyo ezisebenzisa amaza erediyo ukuchonga izinto okanye abantu. I-RFID isebenza ngokugcina inombolo ye-serial kwisixhobo esichonga into okanye umntu. Olu lwazi lubethelelwe kwi-microchip eqhotyoshelwe kwi-eriyali. Oku kubizwa ngokuba yithegi yeRFID. I-chip ihambisa ulwazi lwe-ID kumfundi.
Isazisi esikufutshane -Amakhadi okuba kufutshane okanye amakhadi e-ID angenakunxibelelana. La makhadi asebenzisa i-eriyali efakelweyo ukunxibelelana nomamkeli okude ngaphakathi kweesentimitha ezimbalwa. Amakhadi akufutshane zizixhobo ezifundwayo kuphela kwaye zisetyenziswa ikakhulu njengamakhadi okhuseleko okufikelela emnyango. La makhadi anokugcina ulwazi olulinganiselweyo.
Iinkampani ezinqwenela ukuphuhlisa la maqonga zisebenzisa usetyenziso lweselfowuni oluboshwe, ngemvume, kwindawo yendawo yesixhobo esiphathwayo. Xa usetyenziso lweselfowuni lungena kwindawo ethile, ke iteknoloji yeBluetooth okanye yeNFC inokukhomba indawo yabo apho kunokubangela khona imiyalezo.
Ukuthengisa okukufuphi akusoloko kufuna iiNkqubo eziDibeneyo kunye neTekhnoloji yeGeocentric
Ukuba ungathanda ukuthatha ithuba lokuthengisa kufutshane ngaphandle kwayo yonke itekhnoloji… unga!
Iikhowudi zeQR -Ungabonisa imiqondiso kwindawo ethile enekhowudi ye-QR kuyo. Xa undwendwe lusebenzisa ifowuni ukuskena ikhowudi ye-QR, uyazi ngqo ukuba ikuphi, unokuhambisa umyalezo ofanelekileyo wentengiso, kunye nokujonga indlela abaziphethe ngayo.
Indawo yokupaka yasimahla yeWifi -Ungabonelela nge-wifi hotspot yasimahla. Ukuba ukhe wangena kuxhumano lwenqwelomoya okanye nakwi Starbucks, ukhe wabona ubungqina bokuthengisa obunamandla obutyhale ngqo kumsebenzisi ngesikhangeli sewebhu.
Ukufunyanwa kwesikhangeli seSelfowuni -Faka i-geolocation kwiwebhusayithi yenkampani yakho ukufumana abantu abasebenzisa isiKhangeli seSelfowuni kwindawo yakho. Emva koko unokubangela ukuvela okanye usebenzise umxholo onamandla wokujolisa kuloo mntu- nokuba bakwiWifi yakho okanye hayi. Icala elisezantsi kuphela koku kukuba umsebenzisi uya kucelwa imvume kuqala.
Imali mboleko yokukhetha iphuhlise le infographic njengesishwankathelo soThengiso lokuSondela kumashishini amancinci naphakathi (SMEs):
tags: ubheduibluetoothUkuthengisa ibluetoothiimali-mboleko zokhethogeofencingukwamkelwaUkuthengisa kwiindawo zokuhlalaIndawo yangaphakathiI-hyperlocalIntengiso yehyperlocalibeaconishishini eliphakathiukhangelo mobilekufutshane nonxibelelwano lwentsimiNFCukuthengisa kufutshaneamanani-ntengiso asondeleyoIikhowudi zeQRamashishini amancinci naphakathiShishiniemsyintoni ukuthengisa kufutshaneIndawo yokupaka i-wifi
Ukuthengisa okusekwe kwindawo: i-Geo-Fencing kunye neeBhekhoni
Feb 4, 2016 ngo-9: 30 AM
Isisombululo esisekwe kwintengiso ekufutshane, inokubonelela abathengi bakho ngolwakho lobuqu, amava okuthenga awodwa
Feb 19, 2016 ngo-5: 40 PM
Ibhlog entle enkosi ngokudwelisa iinketho ezahlukeneyo. Bendizibuza ukuba badlale njani elowo nalowo kwesisithuba. Ngaba kuyenzeka ukuba uyazi apho ndingalufumana khona uluhlu oluphezulu lweTekhnoloji ye-Proximity Marketing manfucaturers? Ndijonge ngokukodwa iteknoloji yeBluetooth.
Mar 25, 2016 ngo-3: 45 AM